Otu esi akpọ nọmba ekwentị gbochiri m | Nzukọ mkpanaka
Otu esi akpọ nọmba ekwentị nke gbochiri m
Ignacio Sala | 22/09/2021 18:00 | Nkuzi
Ọ bụrụ na ị ruru edemede a, ọ bụ maka akpọchiela nọmba ekwentị gị site na onye ị chọrọ ịkpọtụrụ. Enwere ike jiri ihe kpatara mmadụ gbochiri gị nke ukwuu na n'isiokwu a anyị ga -atụle ha mana o yikarịrị ka ọ dabere na otu ndị netwọkụ mmekọrịta na -eji.
Ma Kedu ka anyị ga -esi kpọọ nọmba ekwentị nke gbochiri anyị? Dị ka ọ dị na netwọkụ mmekọrịta anyị nwere aghụghọ na / ma ọ bụ ndụmọdụ dị iche iche iji gafee mgbochi ma kpọtụrụ onye ọrụ, mgbe akpọchiri ekwentị anyị, anyị nwekwara usoro aghụghọ iji gafere ya.
1 Jiri nọmba zoro ezo kpọọ
1.1 Otu esi akpọ nọmba zoro ezo na iPhone
1.2 Otu esi akpọ nọmba nwere nọmba zoro ezo na gam akporo
1.3 Otu esi eme oku zoro ezo na ekwentị ọ bụla
2 Zipu SMS
3 Site na WhatsApp
4 Mgbasa mgbasa ozi
5 Ụzọ ndị ọzọ na-abụghị dijitalụ
6 Otu esi egbochi nọmba ekwentị na gam akporo
7 Etu esi egbochi nọmba ekwentị na iPhone
Jiri nọmba zoro ezo kpọọ
Ọ bụrụ na onye anyị chọrọ ịkpọọ etinyela ọnụọgụ anyị na listi ojii ekwentị ha, ọ baghị uru ugboro ole anyị kpọrọ, oku anyị agaghị ada na ekwentị onye nnata anyị. Naanị ihe anyị nwere ike ime iji mee ka oku anyị kpọọ na ekwentị gị bụ izo nọmba ekwentị anyị.
Nsogbu bụ na ọtụtụ mmadụ azala oku site na nọmba zoro ezo, ebe aha a na -egosi, ha na -ezo maka ihe ụfọdụ. Afọ ole na ole gara aga, ọ bụ ihe a na -ahụkarị ịnata oku site na nọmba zoro ezo, nọmba ụlọ ọrụ na -ere ahịa na -eji, mana ebe ọ bụ na amachibidoro usoro a iwu, ọ nweghị onye na -eji ha.
Otu esi akpọ nọmba zoro ezo na iPhone
iOS na -enye anyị ohere izo nọmba ekwentị anyị na oku ọ bụla anyị na -eme site na menu Ntọala, na -eso usoro ndị egosiri n'okpuru:
Nke mbụ, anyị na-enweta ya Ntọala nke ngwaọrụ.
N'ime menu Ntọala, anyị na -enweta nhọrọ ekwentị.
Na menu ekwentị, pịa Gosi onye na-akpọ ID.
N'ime obodo, a na -egosipụta ngbanye ID Onye na -akpọ oku, na -enye ohere igosipụta nọmba ekwentị oge ọ bụla anyị kpọrọ oku. Iji zoo nọmba ekwentị anyị na oku niile anyị na -eme, anyị ga -emerịrị ya gbanyụọ mgba ọkụ.
Otu esi akpọ nọmba nwere nọmba zoro ezo na gam akporo
Android, dị ka iOS, na -enye anyị ohere izo nọmba ekwentị anyị maka oku niile anyị na -eme, na -enweghị ịbanye koodu USSD tupu ọnụọgụ (dịka anyị ga -akọwa na ngalaba na -esote).
para zoo nọmba ekwentị Na oku niile anyị na -eme site na nọmba ekwentị anyị, anyị ga -emerịrị usoro anyị gosiri gị n'okpuru:
Nke mbụ, bụ ịnweta ngwa ahụ ekwentị.
N'ime ngwa akpọrọ, pịa ntọala ntọala nke ihe atọ nọchiri anya wee họrọ Ntọala ndị ọzọ.
N'ime Ntọala agbakwunyere, anyị họrọ ID onye na -akpọ oku na anyị na -egosi nhọrọ Zoo nọmba.
Ị ga -echeta gbanyụọ atụmatụ a mgbe ị naghị eme atụmatụ iji ya, ebe ọ bụ na ọ bụghị, oku niile ị na -akpọ site ugbu a, agaghị egosi nọmba ekwentị gị.
Otu esi eme oku zoro ezo na ekwentị ọ bụla
Koodu ngwa ngwa ma ọ bụ koodu ọrụ USSD na -enye anyị ohere ịmekọrịta ọrụ ekwentị anyị iji chegharịa oku, zipu oku na igwe ịza ajụjụ, mara nguzozi ... Mana na mgbakwunye, kwe ka anyị zoo njirimara anyị mgbe anyị kpọrọ oku.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịkpọ oku na -ezobe nọmba ekwentị anyị, anyị ga -emepe ngwa ekwentị na tinye n'ihu nọmba ekwentị anyị chọrọ ịkpọ * 31 #. Enweghị oghere ị ga -ahapụ n'etiti * 31 # na nọmba ekwentị.
Ọ bụrụ na anyị enweghị ike ịkpọtụrụ site na izo nọmba ekwentị anyị, otu n'ime azịza anyị nwere dị n'aka zipu SMS. Ngwa ndị na -enye anyị ohere igbochi oku na ekwentị mkpanaka anaghị egbochi ozi ederede na -akpaghị aka, yabụ na ọ nwere ike bụrụ na onye na -akparịta ụka anyị amalitebeghịkwa igbochi anyị site na ọwa nkwukọrịta a.
Na SMS a, ị nwere akwụkwọ ntuli aka niile na mbụ enweta azịza ọ bụla, anyị ga -egosipụta onwe anyị nke ọma dị ka o kwere mee iji nwaa ime ka onye na -akparịta ụka kwenye ka ịkpọghee anyị.
Site na WhatsApp
WhatsApp bụ ngwa mpụga nke anaghị etinye n'ime obodo na iOS ma ọ bụ gam akporo, yabụ adịghị etinye n'ime usoro. N'ụzọ dị otu a, mgbe onye ọrụ gbochiri akara ekwentị anyị na sistemụ ịnabata oku site na ekwentị anyị, ngọngọ a anaghị agbatị na ngwa ndị ọzọ.
Nhọrọ ọzọ anyị nwere ike ịkpọtụrụ onye gbochiri anyị bụ site na ozi ma ọ bụ oku site na WhatsApp. Ọ bụrụ na ọ gbochiri gị na WhatsApp, ị gaghị enwe ike ịkpọtụrụ ya, yabụ anyị ga -aga n'ihu na -achọ nhọrọ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ọ nweghị nke ụzọ gara aga nyere anyị ohere ịkpọtụrụ onye ahụ n'ihi na ha gbochiri anyị n'ụzọ niile enwere ike, naanị nhọrọ dijitalụ nke fọdụrụ bụ jiri social media, ma ọ bụrụhaala na ha egbochila anyị.
Ụzọ ndị ọzọ na-abụghị dijitalụ
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị pụrụ iche ịmaliteghachi ọbụbụenyi na onye a na ọwa dijitalụ enyeghị nsonaazụ a tụrụ anya ya, n'ihi na ha egbochila anyị na nyiwe niile na netwọkụ mmekọrịta, naanị nhọrọ anyị nwere bụ Gị na onye maara okwu kparita ụka ịrịọchitere unu abụọ.
Nke a bụ blọgụ teknụzụ nma ọ bụ ụlọ ọrụ mmetụta uche.
Otu esi egbochi nọmba ekwentị na gam akporo
Iji gbochie nọmba ekwentị na gam akporo, anyị ga -emerịrị usoro m gosiri gị n'okpuru. Dabere na mkpanaka ọ bụla, aha nhọrọ nwere ike ịdị iche, ihe a na -ahụkarị n'ihi ọkwa nke ịhazi gam akporo.
Nke mbụ, anyị na-emeghe ngwa ekwentị anyị na -enwetakwa ndepụta oku a na -adịbeghị anya.
Na akụkọ oku, pịa nọmba anyị chọrọ igbochi wee họrọ nhọrọ Gbochie ma ọ bụ kaa akara dị ka spam.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ igbochi oku niile site na nọmba ekwentị na -amaghị, anyị ga -enwerịrị ngwa ekwentị, pịa ntụpọ atọ kwụ ọtọ, pịa Ntọala> Nọmba akpọchiri akpọchi anyị wee họrọ nhọrọ Amaghị ama.
Etu esi egbochi nọmba ekwentị na iPhone
Ọ bụrụ na anyị chọrọ igbochi nọmba ekwentị na iPhone ka ọ ghara inye anyị nsogbu ọzọ, anyị ga -aga n'ihu dị ka ndị a:
Anyị na -enweta ndepụta nke oku anyị nwetara.
Pịa na m dị n'aka nri nke nọmba ekwentị iji gbochie wee pịa bọtịnụ Gbochie kọntaktị.
iOS na -enyekwa anyị ohere igbochi nọmba ekwentị niile nke amaghị ama na -akpọ anyị. Ọrụ a dị site na menu Ntọala> Ekwentị> Gba nkịtị ndị bịara abịa. Mgbe ị na -eme ka ọrụ a rụọ ọrụ, naanị nọmba ekwentị anyị echekwara n'ime akwụkwọ ndekọ aha ga -akụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nkuzi » Otu esi akpọ nọmba ekwentị nke gbochiri m
Otu esi eweghachi akaụntụ Clash Royale